माधव नेपालको साथ छाड्ने हरु र ओली बीच भनाभन, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
माधव नेपालको साथ छाड्ने हरु र ओली बीच भनाभन, अब के हुन्छ ?
काठमाडौँ। अन्तिम समयमा आएर माधव नेपालको साथ छाड्ने केही शीर्ष नेताहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट गएका छन्। नयाँ पार्टी गठनको समयमा नेपालको साथ छाड्ने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू बालकोट पुगेका हुन्।
नेपाललाई साथ नदिएका यी नेताहरुले मंगलबारसम्म १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको घोषणा गर्न ओलीलाई समय दिएका छन्। अन्यथा आफूहरू दल रोज्न स्वतन्त्र हुने उनीहरुको चेतावनी छ। उनीहरुले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको काबाही फिर्ता गर्न माग गरेका छन् भने उनीहरुले नयाँ पार्टी गठनको निर्णयबाट पछि हट्न नेपाललाई आग्रह पनि गरेका छन्।
बुधबार नेपालसहित नयाँ पार्टीमा बस्न चाहने नेतालाई सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ। सरकारले दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल पक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
एमालेका मध्यमार्गी धारका नेताहरुको अल्टिमेटम आज सकिँदै, के गर्लान् ओलीले ?
एमालेका मध्यमार्गी नेताहरुले १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको अल्टिमेट आज साँझ सकिँदैछन्। नेताहरुले अध्यक्ष ओलीलाई आफूहरुका माग पूरा गर्न हिजो आज साँझसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया अघि बढेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर मझधारमा रहेका नेताहरुको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित तत्कालीन एकता कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमित कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका मागहरु पूरा गर्न अध्यक्ष ओलीलाई २४ घण्टाको समयसीमा दिएका हुन्।
बैठकपछि ओलीलाई टेलिफोन गरेर आफूहरुका माग पूरा गर्नका लागि आज बेलुकीसम्मको समय रहेको भनेर जानकारी गराइएको एक नेताले बताए।माधव नेपालको साथ छाडेकामध्ये ८ जना स्थायी कमिटी सदस्य र केही केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु आइतबार अनौपचारिक छलफलमा जुटेका थिए।
छलफलमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना कम रहेको भनेर समेत ब्रिफिङ गरेका थिए।अध्यक्ष ओलीसँग आफ्नो फोनमा संवाद भएको र ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा धेरै इच्छा नदेखाएको रावलले आइतबारको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
नेपाललाई ‘छाडेका’ स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै भेला गरेर १० बुँदे कार्यान्वयनको माग गरेका थिए। लिखित वक्तव्य समेत जारी गरेका उनीहरुले हालसम्म गरिएको निर्णय खारेज गर्ने र १४ सांसदलगायत केही नेतालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरे नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदन फिर्ता लिन लगाउने उनीहरुको योजना छ। नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। आयोगले सनाखतका लागि भदौ ९ गते बोलाएको छ।